Shiinaha Tungsten Carbide Studs Soo saaridda iyo Warshad | N&D Carbide
Tungsten carbide biinanka ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa warshadaha macdanta. Carbide Tungsten waxay leedahay iska caabin wanaagsan oo duug ah. Waxaan u qaabeynaa qaybaha si waafaqsan sawirada iyo heerka maadada la cayimay.
Haddii mashiinka duudduuban uu isticmaalo silbado carbide ah oo sibidh leh, wuxuu helayaa cufnaan sare, xoog sare iyo hanti saamayn wanaagsan ku yeelanaysa. Nolosha dhererka carbide sibidhka ayaa ka badan 10 jeer wax ka badan waxyaabaha kor ka baxa.
Waxyaabaha Teknolojiyada Wax Soo Saarka
1. Hemispherical si looga ilaaliyo istiqfaarta in lagu burburiyo isku-buuqsanaanta.
2. Wareegyada wareegsan, ka ilaali jeexjeexayaasha waxyeellada inta lagu jiro wax soo saarka, gaadiidka, qaybinta iyo isticmaalka.
3. Suuxdinta HIP waxay hubisaa isafgarad wanaagsan iyo adkaanta alaabta.
4. Tiknoolajiyad gaar ah oo lagu baabi'iyo culeyska dusha ka dib markii la shiido dusha sare, isla markaana la kordhiyo adkaanta dusha isla waqtigaas.
5. Dufanka loo isticmaalo dusha sare ee alaabada si looga fogaado oksidheynta.
Hore: Kartoo Tungsten Carbide Xidho Qaybo
Xiga: Dhirta Tungsten Carbide
Shiinaha Carbide Studs
Shiinaha Hpgr Studs